सुर्य लाई किन जल चढाउने ? – AstroSimara.Com
By Astro Sudeep Dhakal	 On Jun 1, 2018
ज्योतिष र बास्तुशास्त्र अनुसार सुर्यलाई जल चढाउने चलन छ ।
किन चढाउने ? कसरी चढाउने त ?
(धर्ममा आस्था राख्ने र नराख्ने दुबैलाई सुझाब)
सुर्यबाट positive र negative दुबै किरण पृथिबिमा आउछ। तामा (copper)को भाडोमा जल राख्ने र सुर्यतिर हेरी हात माथि गरी चढाउने, जुनबेला पानीले पृज्म (prism)को काम गर्छ र सुर्यबाट आएको positive ray मात्र हाम्रो शरिरमा सप्तरङि भएर प्रबेस गर्छ। तामाको भाडोबाट पानी flow हुँदा हातको ray तामाले block गर्दिन्छ र solar energy one way हुन्छ ।
सात किरणमा रातो कलरले हाम्रो शरिरमा भएको रगत लाई , orange colorले मुटुलाई , blueले नसा(nerves) लाई , greenले पेट( pancreas)मा, viloent र indicaले किड्नी र लिभरमा र yellowले मस्तिस्क (दिमाग)मा गएर positive vibration को बिकास गर्छ ।
सुर्यलाई जल चढाउदा हाम्रो सरिरको नसा, रगत, मुटु, फोक्सो, दिमाग, पाचन प्रकृयालाई स्वास्थ राख्न सहयोग पुर्याउछ। मान्छेको confident power बढ्छ। तपाईं आखामा चस्मा लगाउनुहुन्छ, जो कम पावरको चस्मा प्रयोग गर्नुहुन्छ लगातार २ महिना सुर्यलाई जल चढाउनुस् आखाको समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुन्छ ।
जल चढाउनु र sun bath गर्नुमा समानता पनि छ, बिदेशहरुमा प्राय sun bath को चलन बढी छ ।
ॐ घ्रीणि: सुर्याय नम :
नैॠत्योन्मुखी भूमिको लागि वास्तु सिद्धान्त